अल्ट्रासोनिक एवोकाडो तेल निकासी - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक निकासी र मालकिनले एभोकैडो तेल उत्पादनको उपज बढाउँछ।
सोनक्किङ एक नरम गैर थर्मल प्रक्रिया हो र यसैले एभोकैडो तेलको उच्चतम ग्रेड उत्पादन गर्न उपयुक्त छ।
अल्ट्रासोनिक रूप से सहायता वाला तेल दबाएर उपज मा सुधार गर्छ, उच्च तेल ग्रेड को रखताछ र तेल निष्कर्षण को बढावा बढ्छ।
अल्ट्रासोनिक तेल निकासी र मालाक्सेशन
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक उच्च गुणवत्ता वाला खाद्य तेल (उदा जैतून, फ्लोक्ससीड, अंगूरको बीज, अल्गा, नरिवल आदि) साथै सक्रिय यौगिकहरू (जस्तै फिटोक्यामिकल्स, एन्टीएक्सिडेंट, भिटामिन, रङन्ट आदि)। बिरुवाको कच्चा मालको पोषणको गुणस्तर कायम राख्न हल्का र गैर-थर्मल निकासी प्रविधी महत्वपूर्ण छ। अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण र अपरिवर्तन एक गैर थर्मल उपचार हो, जुन निकासी को phytochemical ढाँचा को संरक्षण को रूप मा उपज बढ्छ।
अल्ट्रासोनिक प्रसोधनले तेल उत्पादन बढाएर एवोकोडो तेलको चिसो-दबाई राख्न मद्दत गर्दछ। गैर-थर्मल प्रेसिजन टेक्नोलोजी एभोकैडो तेलमा नतिजा राख्ने, जसले यसको बहुमूल्य पोषण संरचना, पूर्ण स्वादयुक्त पुरातत्व र तीव्र पन्नाको हरियो रंग राख्दछ।
अल्ट्रासोनिक निकास र एकोकोडा लुग्ने को निकासी तेल तेल रिलीज मा सुधार गर्दछ र गुणवत्ता को प्रभाव को बिना औद्योगिक एवोकैडो तेल उत्पादन मा संभावित रूप देखि उन्मूलन समय को कम गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक Avocado तेल निकासी को लाभ:
उच्च गुणवत्ता एभोकैडो तेल
सावधानीपूर्वक अल्ट्रासोनेसनले तेल राख्छ – न्यानो-दबाउने प्रक्रियाहरूको विपरीत – सबै यसको स्वस्थ पोषण सम्बन्धी यौगिकहरू जस्तै भिटामिन, एंजाइमहरू, माइक्रोनट्रेन्ट्स, र स्वादको घटकहरू।
Avocado तेल उत्पादन
ओभोकैडो तेलको उत्पादन जैतूनको तेलको उत्पादनमा धेरै समान छ। Avocado तेल डे-पिस्टेड र डे-स्किन एभकोडबाट उत्पादन गरिन्छ। तेलको द्रुत प्रक्रियाको लागि, केवल एवोकोडो मासु (शुद्धता वा लुगा) प्रयोग गरिन्छ। पछि, मासु एवोकोडो लुगाको लागि जमीन हो र त्यसपछि अनुमानको लागि खारेज गरिएको छ। 40-60 मिनेट 45-50 डिग्री सेल्सियस मा।
अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर सजिलैसँग कुनै पनि अवोकाडो तेल निकासी लाइनमा सजिलैसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ ताकि तेल थिचेर सुधार गर्न सकौं ताकि कच्चा पदार्थको समान मात्राबाट तेलको उच्च मात्रा पुनः प्राप्त हुन्छ।
ठण्ड-दबाईएको उच्च गुणस्तरयुक्त तेलको उत्पादनको अलावा, sonication avocado तेल को डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण मा लागू गर्न सकिन्छ, उदाहरण को लागि एलाकोडा तेल द्वारा सलाद ड्रेसिंग, सस या यहां सम्म कि पानी को घटक संग कस्मेटिक उत्पादनहरू। अल्ट्रासोनिक पायसीकरणको बारे थप जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक एवोकाडो तेल निकासी प्रणाली
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर र निकाय को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य तेल को उत्पादन को लागि आपूर्ति गर्दछ। हेलस्चरको अल्ट्रासोनिक सिस्टमहरू सजिलै थप कुञ्जी र कुञ्जी एभकोडो तेलको थिचो / अपरिहार्य रेखाहरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
एभोकैडो वा जैतूनको तेलको थिचो रेखामा एकीकरणको लागि, हेलसेस्टरको UIP2000hdT (2kW) वा UIP4000hdT (4kW) सबै भन्दा धेरै चयनित प्रणालीहरू हुन्। तिनीहरू सोनोट्रोडहरू र फ्लो सेल र्याक्टरहरूसँगै कच्चा माल (एवोकाडो पल्प) र प्रशोधन क्षमतासँग सुसज्जित छन्।
हाम्रो सबै अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरू 24/7 अपरेसनका लागि निर्मित सर्तहरूको लागि बनाइएको छ। औद्योगिक ग्रेड भरिएको, हेलसेस्टरको अल्ट्रासाउन्ड ट्रांसड्युडरहरू धूल र / वा नम वातावरणमा स्थापित गर्न सकिन्छ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूले धेरै उच्च प्रवृतिहरू प्रदान गर्न सक्छन्। 200 सेमिमिटरसम्मको एम्पलिभ्युले लगातार 24/7 सञ्चालनमा लगातार भाग लिन सकिन्छ। हेल्सेचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको बलियोताले भारी शुल्क र वातावरणमा मागमा 24/7 अपरेसनको लागि अनुमति दिन्छ।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अल्ट्रासोसो सहयोग पुर्याउने फियोकोडा तेलको फाइदाहरू खोज्न!
स्थापना UIP2000hdT निकासीको लागि
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष (जसलाई पनि सोनो-निष्कर्षण भनिन्छ) जैविक सामग्री (जस्तै तेल, घटकहरू रिलीज गर्नको लागि एक प्रसिद्ध, विश्वसनीय विधि हो। आवश्यक तेल, aromatics, antioxidants, पोषण यौगिकहरू)। अल्ट्रासोनिक रूप देखि उत्पन्न cavitation perforates या सेल पर्खाल तोड्छ ताकि intracellular सामाग्री – उदाहरणका लागि मूल्यवान यौगिकहरू जस्तै तेल, स्वादहरू, भिटामिन, कलरन्टहरू – जारी गरिएको छ। अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक अत्यधिक प्रभावी र कुशल विधि हो र यसको प्रयोग व्यापक रूपमा तेल उत्पादन र सक्रिय पदार्थहरु को लागि प्लाज्माटिक को लागि ठूलो प्लांट निकाट को उत्पादन को लागि संयंत्र सामाग्री (उदाहरणार्थ फलहरु, जड़ी बूटी, नट, बीउ, पत्तियां) देखि निकालन को लागि प्रयोग गरिन्छ, पोषक तत्व, कस्मेटिक र खाद्य उद्योग।
ओभोकैडो तेलको उत्पादन जैतूनको तेलको उत्पादनमा धेरै समान छ। एभोकैडो तेल प्राप्त गर्न, पकाउने अवकासहरू खुलिएका छन् र ढुङ्गा (बीउ) हटाइन्छ। पछि, मासु एवोकोडो लुगाको लागि जमीन हो र त्यसपछि अनुमानको लागि खारेज गरिएको छ। 40-60 मिनेट 45-50 डिग्री सेल्सियस मा।
अतिरिक्त वर्जिन अवकोडो तेल
अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल जस्तै, ठण्ड-दबाएको अरोकोडो तेल असुरक्षित छ र यसैले फल मासुको स्वाद र रंगका विशेषताहरू राख्छ।
Avocado तेल यसको गुणस्तरको आधारमा वर्गीकृत गरिएको छ: थप कुंवारी एवोकोडो तेलको अलावा, कुञ्जी एओकोडो तेल जस्तै शुद्ध (= परिष्कृत) एभोकैडो तेल साथै साथै मिश्रणहरू उपलब्ध छन्। सबै अरोकोडो तेलहरू, जुन कुहिरो छैन, सामान्यतया उच्च तापमानमा निकालिन्छ। यी उत्थानका तेलहरूका लागि अतिरिक्त प्रक्रिया चरणहरू र / वा रासायनिक सल्विन्टहरू एओकोडोसबाट तेल प्राप्त गर्न लागू हुन्छन्।
वनस्पति तेलहरूको परिष्करण प्रक्रिया तेलको धुआं बिन्दु, शेल्फ-जीवनलाई असर गर्छ & स्थिरता, रंग, स्वाद, अम्लता र संरचना (पोषण प्रोफाइल)। प्रशोधन प्रक्रियाको बेला, प्राकृतिक मोम एवोकोडो तेलबाट हटाइएका छन्। यो एक उच्च धूम्रपान बिन्दु तिर जान्छ। Avocado तेल एक असाधारण उच्च धूम्रपान बिन्दु छ: अपरिहार्य तेलको धूम्रपान बिन्दु 480 डिग्री फारेनहाइट (249डिग्री सेल्सियस) हो र परिष्कृत रूप 520 डिग्री फारेनहाइट (271 डिग्री सेल्सियस) को तापमान को सामना गर्न सक्छ। सही धुवाँ बिन्दुले तेल शोधनको गुणस्तर र यसको उपयोग गर्नु अघि तेल हैंडलिंग र भण्डारणमा निर्भर गर्दछ।
Avocado तेलले अन्य स्वादको लागि एक वाहक तेलको रूपमा काम गर्दछ। यो mononsururated वसा मा उच्च छ र भिटामिन ई Avocado तेल पनि carotenoids र अन्य पोषक तत्व को अवशोषण को बढावा गर्दछ।
अतिरिक्त कुंवारी एवोकोडो तेल एओकोडो तेल को एक मात्र ग्रेड हो जो महत्वपूर्ण मात्रा को एंटीओक्सिडेंट भिटामिन ई छ। साथै, अन्य फायदेमंद phytochemicals र polyphenols को ठंडी ठंड दबाएर संरक्षित गरिन्छ उच्च गुणवत्ता वाला तेल।
एभोकैडो (एलिगेटर नाशपातीको रूपमा पनि चिनिन्छ) ले फललाई जनाउँछ, जो एभोकैडो रूख (पर्सिया अमेरिका) मा बढ्छ। बोटानिकली हिसाबले, एभोकैडो फलहरू एक ठूलो ठूलो बीजसहितको ठूलो बेरीको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।
बजारमा विभिन्न प्रकारका एकोकोडहरू छन्। 'Hass’ एभोकैडोको सबैभन्दा साधारण खेती हो। यसले फलफूल सालको उत्पादन गर्दछ र लगभग प्रदान गर्दछ। विश्व बजारको लागि 80% खेती avocados।
एवोकोडो को अन्य साधारण किसान Choquette, Lula, Gwen, Maluma, Lamb Lamb, Pillerton, Reed, Fuerte, Sharwil, Zutano, Bacon, Ettinger, Sir Prize, and Walter Hole को रूपमा चिनिन्छन्।
Avocado लाई अक्सर सुपरफूड भनिन्छ किनभने यो स्वस्थ बोसो, भिटामिन र माइक्रोनट्रेन्ट्स प्रदान गर्दछ।
एक फल हुन, एभोकसोसहरूसँग उल्लेखनीय उच्च मोटो सामग्री छ: यसको कुल क्यालोरीका 71 देखि 88% एभोसोटाको मोटो सामग्रीबाट हो। तथापि, अटोकोडो यसको स्वस्थ मोटो संरचनाको लागि चिनिन्छ, जुन 71% monounsaturated फैटी एसिड (MUFA), 13% polyunsaturated फैटी एसिड (PUFA), र 16% संतृप्त फैटी एसिड (SFA), स्वस्थ रक्त लिपिड को बढावा दिन को लागि मदद गर्दछ प्रोफाइलहरू र एभोकैडो वा अन्य फलफूल र सब्जामुनीबाट वसा घुलनशील भिटामिन र फाइटोकोमिकल्सको bioavailability लाई बढावा गर्छ, स्वाभाविक रूपमा फाइबरमा कम, जो avocados संग उपभोग गरिन्छ। (Dreher et al। 2013)
एकोकोड्स pantothenic एसिड, आहार फाइबर, भिटामिन K, तांबे, फोलेट, भिटामिन बी 6, पोटेशियम, भिटामिन ई (α-tocopherol), भिटामिन सी, -कोरेन र लोकोपिनमा उच्च छ। तिनीहरू प्राकृतिक रूपमा सोडियम, चिनियाँ र कोलेस्ट्रलबाट मुक्त हुन्छन्।